Fitsapana Batterie, Fanamarinana Batterie, Batterie UN38.3 - MCM
Guangzhou MCM Certification & Test Company
Ataovy tsotra sy mahafinaritra ny fanamarinana sy fitsapana.
Guangzhou MCM Certification & Testing Co., Ltd. (antsoina hoe MCM) dia fikambanana tsy miankina tsy miankina manerantany, izay manam-pahaizana manokana amin'ny fanomezana ny vaovao farany sy ny vahaolana matihanina momba ny fitiliana sy ny fanamarinana ny bateria amin'ny sehatra manerantany.
MCM dia naorina araka ny rafitra fitantanana kalitao ISO/IEC 17020 & 17025 sy rafitra fitantanana fiarovana ny fampahalalam-baovao ISO/IEC 27001, ary eken'ny CNAS, CMA, CBTL, CTIA.
MCM dia mifikitra amin'ny paikadin'ny fampandrosoana fa ny orinasa madinika dia tokony hanatsara hatrany sy hampiroborobo ny tanjaka mba ho lasa lehibe kokoa amin'ny farany ary tsy maniry ny fahombiazana haingana.
MCM dia mitazona ny maha-izy azy ary mifantoka amin'ny fanomezana serivisy fitiliana sy fanamarinana ho an'ny vokatra bateria isan-karazany amin'ny fomba tsy tapaka.Amin'izany fomba izany ihany no ahafahan'ny MCM ho tompon'andraikitra amin'ny mpanjifany ary manolotra vahaolana tsara amin'ny fomba maharitra.
Mikaroka amin'ny: rehetra
Tombana fanamarinana batterie ESS eo an-toerana...
Ataovy tsotra sy mahafinaritra ny fanamarinana sy fitsapana.NY VISIONS:
Ataovy azo antoka kokoa izao tontolo izao.
Ampio ny mpiasa tsirairay hitombo;
Fanahin'ny asa tanana.